Posted by Tranquillus | Jan 2, 2019 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Khadka mawduuca waa dhinac lagama maarmaan u ah fariin kasta oo ganacsi oo aad rabto inaad ku dirto iimaylka. Si iimaylkaagu ugu adeego ujeeddadiisa, khadka mawduuca wuxuu u baahan yahay inuu ku soo jiito dareenkaaga habka saxda ah. Dad badan ayaan dhinacooda u qaadan email si dhab ah. Dhab ahaantii, dadka qaarkiis kaliya waxay soo diraan iimaylo aan mawduuc lahayn waxayna filayaan natiijooyin iimayladan ah! Ku darista khadka mawduuca iimaylka ganacsiga maaha sifo ikhtiyaari ah oo qorista iimaylka ganacsiga, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah.
Aynu si dhakhso ah u eegno qaar ka mid ah sababaha ay email-yadaada ganacsigu ugu baahan yihiin walxaha.
Iska ilaali boostaada in laguu tixgeliyo
Emails oo aan loo dirin sheyga ayaa loo diri karaa gawaarida ama khaanadda. Tani si toos ah ayaa loo sameeyaa, dadku ma soo qaadaan farriimaha bogga "spam" si dhab ah. Intaa waxaa dheer, badiba dadka aad soo diri lahayd emayl xirfad leh si ay aad isugu mashquulaan si ay u falanqeeyaan faylka liigooda ee liiska. Haddii aad runtii rabtid emailkaaga in la akhriyo, hubso mawduuca emailkaaga si fiican loo qeexay.
Ka hortag xayiraadda emailkaaga
Email ah oo aan maaddo lahayn ayaa loo tixgelin karaa inaysan u qalmin akhriska. Marka dadku eegaan emailkooda, waxay u badan tahay inay tirtiraan emayl aan khusayn. Sababtuna waa sababo wanaagsan. Marka hore, emailka waxaa loo tixgelin karaa fayras. Inta badan emailada xasaasiga ah waxay leeyihiin khadadka mawduuca ah; Sidaa darteed, qofka kaa qaataa ayaa si fudud u tirtiri kara si looga hortago in fayruusku uu galo sanduuqa boostada ama kombiyuutarka. Marka labaad, e-mailka aan khuseynin waxaa loo tixgelin karaa mid aan ku habbooneyn qofka kaa aqbalaya. Tan iyo markii loo isticmaalo in la arko mowduucyada mowduucyada marka hore, kuwa aan lahayn khadadka sheyga ayaa laga yaabaa in laga tirtiro ama lama aqrin doono sababtoo ah waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo mid aan habooneyn.
READ Dooro dhammaadka saxda ah ee jumladda emaylka, laakiin sidee baad u mareysaa?
Hel dareenka qofka qaata
Mawduuca mawduuca e-maylkaaga ayaa aragti ugu horreeya siinaya wada-hadalkaaga. Kahor furitaanka emaylka, mawduuca wuxuu mabda 'ahaan ku tilmaamayaa mawduuca qofka qaata wuxuuna badiyaa go'aamin doonaa in e-maylka la furay iyo in kale. Sidaa darteed, shaqada ugu weyn ee xariiqda maaddada waa in la qabsado dareenka qofka qaata si ay u furi karaan una akhriyi karaan emaylka. Tani waxay ka dhigan tahay in khadka maadada uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee go'aamiya in la akhriyo ama la akhriyo emaylkaaga (magacaaga iyo cinwaanka emaylka ayaa sidoo kale muhiim u ah xaqiijinta tan).
Muhiimada mowduucyada mawduuca ma noqon karto mid aad u kacsan. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan oo kaliya in alaab aad ku leedahay emailkaaga si aad uga hortagto inaad isbaarisid ama tirtirto. Waa in aan diirada saarnaa khadadka goolka ee ku guuleysta himilada la doonayo. Tani waa xariiq mawduuc oo dhiiri gelinaysa aqbalahaaga si aad u furto emailkaaga, u akhri oo qaado tallaabada lagama maarmaanka ah.
Qorida mawduucyo mawduucyo waxtar leh
Email kasta oo xirfad leh waxaa loogu talagalay inuu saameyn ku yeesho maskaxda qofka. Mowduuc wanaagsan oo munaasab ah oo loo qorsheeyey waa barta muhiimka ah ee lagu gaarayo hadafkani. Aynu eegno aasaaska qoraalka mawduuca ku habboon e-emayl ganacsi.
Isticmaal luuqad rasmi ah ama xirfad u leh alaabtaada. Email-yada xirfadlayaasha ah badiyaa waa mid caadi ah ama rasmi ah. Tani waxay ka dhigan tahay in mawduucyadaada mawduucani ay tahay inay ka tarjumaan tan si emailkaada loo tixgeliyo xirfad iyo waxtar.
Mawduucaaga mawduucu waa inuu daneeyaa bixiyahaaga. Waa in loo tixgeliyaa haboonaanta emailkaaga si loo akhriyo. Tani waa inay sidoo kale si sax ah u muujisaa ujeedada emailkaaga. Haddii aad shaqo dalbanayso, khadka maadada waa inuu ku jiraa magacaaga iyo jagada aad codsaneyso.
READ Email template si aad raaligelin ugu noqoto saaxiib
Noqo mid kooban
Mawduuca mawduuca e-mayl ganacsi uma baahna inuu dheeraado. Waxaa loola jeedaa in lagu soo jiito dareenka qaataha hal mar. Markay sii dheeraato, ayay sii kordheysaa xiisaha badani. Tani waxay yareyn doontaa fursadaha wax aqrinta. Qaatayaasha ka hubiya emaylladooda aaladaha mobilada ma arki karaan dhammaan khadadka maadada dheer. Tani waxay ka hor istaagi kartaa akhristaha inuu ku arko macluumaad muhiim ah khadka maadada. Sidaa darteed, waa dantaada ugu wanaagsan in la hubiyo in maadooyinka emaylkaaga shaqada la hayo oo kooban si emailadaada loo akhriyi karo
Waxaa sidoo kale muhiim ah inaad mawduucaaga gaarka u ahaato. Waa inay qaadaa hal fariin keliya. Haddii e-mailkaagu u maleynayo inuu gudbiyo fariimo dhowr ah (si looga fogaado), waxa ugu muhiimsan waa in lagu muujiyo mawduuca mawduuca. Mar kasta oo suurtagal ah, email xirfad leh waa inuu lahaadaa hal mawduuc, hal ajandeed. Haddii ay lagama maarmaan tahay in loo soo diro fariimo dhowr ah oo loo diro qof qaata, emails gaar ah waa in loo diraa ujeedooyin kala duwan.
Samee khalad la'aan
Hubi naxwaha iyo khaladaadka saxda ah. Ha ilaawin in tani ay tahay aragtida ugu horeysa. Haddii qalad naxwe ahaaneed ama qaabka muuqaalku uu ka muuqanayo mawduuca mawduuca, waxaad abuurtay fikradda xun ee maskaxda qofka. Haddii emailkaaga la aqriyo, emailka oo dhan wuxuu noqon karaa mid la midabaysan karo aragti xun, sidaas darteed waa muhiim inaad sameyso faahfaahin buuxda ee mawduuca ka hor inta aanad u dirin emails ganacsi.
READ Isticmaal email email
Muhiimadda mawduuca mawduuca ee emayl xirfadeed Janaayo 2nd, 2019Tranquillus
horeMarka wajiga wejiga uu ka fiican yahay emailka
socdaQorshaha qoraalka emailka ah ee waxtarka leh
Waa maxay edeb caynkee ah si aad ugu dirto mahadnaqa email xirfadle ah?
Template warqad: codso lacag bixinta fasaxaaga aan la isticmaalin